စေ့စပ်လက်စွပ်ကို Instagram မှာ ထုတ်ကြွားလိုက်တဲ့ Ariana Grande
16 Jun 2018 . 11:13 AM
Ariana Grande နဲ့ သူ့ရဲ့ ချစ်သူ Pete Davidson တို့ စေ့စပ်လိုက်ပြီဆိုတာ ကြားသိကြတာ ကြာပြီဖြစ်ပေမယ့် စေ့စပ်လက်စွပ်လို သက်သေဓာတ်ပုံတွေ မတက်လာသေးလို့ သို့လော သို့လော ဖြစ်နေကြတာပါ။
အခုတော့ ‘Saturday Night Live’ ရဲ့ ကြယ်ပွင့် Pete Davidson ဟာ Instagram မှာ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံတင်ပြီး ပရိသတ်ကို လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါပြီ။ ဓာတ်ပုံထဲမှာ သူနဲ့ Ariana Grande တို့ လက်ကိုင်ထားပြီး Ariana Grande ရဲ့ စေ့စပ်လက်စွပ်ဟာ သိသိသာသာ ထင်ထင်ရှားရှားပြူးပြူးကြီးပါဝင်လာတာပါပဲ။
ဒီပုံရဲ့ Caption ကိုလည်း ကိုရွှေ Pete က ရိုဆန်တဲ့ အနေနဲ့ “U know what you’d dream it be like? It’s better than that,”လို့ ဖွဲ့နွဲ့ပြီး ရေးထားခဲ့ပါတယ်။
Pete နှဲ့Ariana တို့အတွဲဟ စဒိတ်ပြီး တွဲပြီး သိပ်မကြာခင်ဘဲ အခုလို စေ့စပ်တဲ့ အဆင့်ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရောက်သွားလို့ ပရိသတ်တွေက အံ့အားသင့်နေကြပြီး သား ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ယောက်လုံးဟာလည်း အခုမှ အသက် (၂၄) နှစ်သာ ရှိနေပါသေးတယ်။
နီးစပ်တဲ့ အတွင်းသတင်းတွေကတော့ “သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ သံလိုက်လို ရုတ်တရုတ် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်အရမ်းနီးစပ်သွားကြပြီး သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကလည်း ဒီလောက်ထိ မြန်မယ်လို့ မထင်ထားပါဘူးတဲ့။ ပြီးတော့ အချိန်တွေအကြာကြီး ချစ်သွားဖို့ မျှော်လင့်ထားတယ်” လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
TMZ သတင်း Website အရတော့ Pete ဟာ Ariana ရဲ့ စေ့စပ်လက်စွပ်ကို ဒေါ်လာ ၉၃၀၀၀ လောက် အကုန်အကျခံဝယ်ယူပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ ဒီလို အချစ်ခံရတဲ့ Ariana ဟာလည်း မိန်းကလေးတို့ ထုံးစံအတိုင်း အဲ့ဒီစေ့စပ်လက်စွပ်ကို ဝတ်ပြီး Songwriters Hall of Fame’s 49th Annual Induction and Award ညစာစားပွဲကို ပွဲတက်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။
ပျော်စရာ ချစ်ကြည်နူးစရာကာလများ ဖြစ်ပါစေ.. Ariana Grande နဲ့ Pete Davidson ရေ။
စစေ့ပျလကျစှပျကို Instagram မှာ ထုတျကွှားလိုကျတဲ့ Ariana Grande
Ariana Grande နဲ့ သူ့ရဲ့ ခဈြသူ Pete Davidson တို့ စစေ့ပျလိုကျပွီဆိုတာ ကွားသိကွတာ ကွာပွီဖွဈပမေယျ့ စစေ့ပျလကျစှပျလို သကျသဓောတျပုံတှေ မတကျလာသေးလို့ သို့လော သို့လော ဖွဈနကွေတာပါ။
အခုတော့ ‘Saturday Night Live’ ရဲ့ ကွယျပှငျ့ Pete Davidson ဟာ Instagram မှာ ဓာတျပုံတဈပုံတငျပွီး ပရိသတျကို လှုပျခတျခဲ့ပါပွီ။ ဓာတျပုံထဲမှာ သူနဲ့ Ariana Grande တို့ လကျကိုငျထားပွီး Ariana Grande ရဲ့ စစေ့ပျလကျစှပျဟာ သိသိသာသာ ထငျထငျရှားရှားပွူးပွူးကွီးပါဝငျလာတာပါပဲ။
ဒီပုံရဲ့ Caption ကိုလညျး ကိုရှေ Pete က ရိုဆနျတဲ့ အနနေဲ့ “U know what you’d dream it be like? It’s better than that,”လို့ ဖှဲ့နှဲ့ပွီး ရေးထားခဲ့ပါတယျ။
Pete နှဲ့Ariana တို့အတှဲဟ စဒိတျပွီး တှဲပွီး သိပျမကွာခငျဘဲ အခုလို စစေ့ပျတဲ့ အဆငျ့ကို မွနျမွနျဆနျဆနျရောကျသှားလို့ ပရိသတျတှကေ အံ့အားသငျ့နကွေပွီး သား ဖွဈပါတယျ။ နှဈယောကျလုံးဟာလညျး အခုမှ အသကျ (၂၄) နှဈသာ ရှိနပေါသေးတယျ။
နီးစပျတဲ့ အတှငျးသတငျးတှကေတော့ “သူတို့နှဈယောကျဟာ သံလိုကျလို ရုတျတရုတျ တဈယောကျကို တဈယောကျအရမျးနီးစပျသှားကွပွီး သူတို့နှဈယောကျလုံးကလညျး ဒီလောကျထိ မွနျမယျလို့ မထငျထားပါဘူးတဲ့။ ပွီးတော့ အခြိနျတှအေကွာကွီး ခဈြသှားဖို့ မြှျောလငျ့ထားတယျ” လို့လညျး ဆိုပါတယျ။
TMZ သတငျး Website အရတော့ Pete ဟာ Ariana ရဲ့ စစေ့ပျလကျစှပျကို ဒျေါလာ ၉၃၀၀၀ လောကျ အကုနျအကခြံဝယျယူပေးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျတဲ့။ ဒီလို အခဈြခံရတဲ့ Ariana ဟာလညျး မိနျးကလေးတို့ ထုံးစံအတိုငျး အဲ့ဒီစစေ့ပျလကျစှပျကို ဝတျပွီး Songwriters Hall of Fame’s 49th Annual Induction and Award ညစာစားပှဲကို ပှဲတကျခဲ့ပါတယျတဲ့။
ပြျောစရာ ခဈြကွညျနူးစရာကာလမြား ဖွဈပါစေ.. Ariana Grande နဲ့ Pete Davidson ရေ။